Sharukh Khan, Akshay Kumar Mise John Abraham - Waa Kuma Jilaaga Bollywood Ee Mar Kaliya Isku Rogay Mulkiile Koox Kubadda Cagta Ah - Cadalool.com
Sharukh Khan, Akshay Kumar Mise John Abraham – Waa Kuma Jilaaga Bollywood Ee Mar Kaliya Isku Rogay Mulkiile Koox Kubadda Cagta Ah
Sannadkii shanaad ayay kooxda kubadda cagta NorthEast United ka ciyaaraysaa horyaalka kubadda cagta waddanka India ee ISL, balse muliilaheeda ayaa ka magac weyn oo dunida inteeda badan laga yaqaanaa.
Marka la eego tirada dadka ku taxan baraha bulshada ee kooxda, maaha wax la xusi karo, balse mulkiilaheeda waxa baraba bulshada kala socda dad ka badan 18 milyan oo qof.
Dalka India caan kama aha ciyaaraha kubadda cagtu, dunidana ma yimaaddaan iyagoo ku loollamaya tartan qaareedyada, balse waxay yimaaddaan iyagoo garabka ku sita ul ay ku ciyaaraan Cricket-ka oo ah ciyaarta ugu caansan dalka.
Marka laga yimaaddo shaqsiyaadka caadiga ah, waxa adag in la maqlo aktar jilaa ka ah shirkadda Bollywood inuu xiiseeyo kubadda cagta balse aflaamtooda qaarkood ayay melelaan iyadoo qaybo ka mid ah ay ciyaarayaan kubadda cagta.
Haddaba maanta waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa warbixin ay BBC Sports ka qortay sheeko ugub ah oo shirkadda Bollywood gudaheeda ka jirta, taas oo ah in mid ka mid ah jileyaasha ugu caansan xilligan uu samaysay koox kubadda cagta ah oo sannadkii shanaad ka ciyaaraysa tartanka horyaalka heerka koowaad ee ISL.
Maaha Salman Khan ama Sharukh Khan, mana ah Akshay Kumar-ka kaarateega ku fiican balse waa nin jidhkiisu dhisan yahay oo lagu naanayso ‘The Hulk of Bollywood’.
John Abraham, oo jilay in ka badan 50 film oo qaarkood uu isagu sameeyey oo haddana agaasimay, ayaa xilligii uu carruurta ahaa waxa uu ku riyoon jiray inuu noqdo ciyaartoy metela xulka qaranka kubadda cagta India, laakiin taasi uma suurtogelin.
Hadda oo ay da’diisu tahay 46 jir ayuu samaysay koox kubadda cagta ah oo loo bixiyey North East United FC taas oo sannadkii 2013 si rasmi ah usoo gashay saaxadda ciyaaraha.
John Abraham oo maalgelin ku sameeyey ganacsiyo uu ka abuuray magaalada uu ku dhashay ee Mumbai, waxa uu hadda yahay mulkiilaha kooxdan oo uu doonayo inay noqoto tan ugu magaca weyn dalka India, taas oo ay kasoo bixi karaan ciyaaryahanno dalkiisa metela oo sumcad uga sameeya kubadda cagta.
Kooxda NorthEast United FC ee uu iska leeyahay John Abraham
Haddaba sidee ayuu u maamulaa kooxdan?
John Abraham waxa uu sheegay in dhaqaalaha ku baxa kooxdu uu ka sii badan yahay kharashka ku baxa laba filim oo si weyn loo maalgeliyo, waxaanu xusay inay ku adag tahay shaqiyaadku inay yeeshaan kooxo.
“Dhamaan kooxaha jira, waxa iska leh shirkaddo bilyanneero dollar haysta. Anagu waxaanu nahay kaliya koox ay leeyihiin oo maamulaan shaqsiyaad daacad iyo samir leh. Waxaanu luminaynaa lacag.” Sidaas ayuu yidhi John Abraham.
Sannad kaddib markii uu kooxda sameeyey, waxa uu guursaday Priya Runchal oo ay xafladdoodii aroosku dhacday 2014, waana qofka uu mahadda ugu badan ka sheegtay ee ku garab siisa maamulka kooxdan.
“Maan samayn kareen Priya la’aanteed. Aniga iyadaa iiga khibrad badan hawlaha iyo lacagahaba, iyada ayaana maamusha kooxda oo shaqo aan caadi ahayn gelisa.” Ayuu ku daray.